Zvese zvaunoda kuti uzive kuenda kuTibet | Kufamba Nhau
Zvese zvaunoda kuti uzive kuenda kuTibet
Mariela Carril | | China, Matipi
Kune zvakanakisa nzvimbo. Zvichida chimwe chinhu chiri kure kana chakaoma kusvika, ichokwadi, asi pamwe izvozvinetso zvakafanana zvinopa iyo aura yakavapoterera. The Tibet ndeimwe yeaya anoshamisa, ari kure uye akaomarara nzvimbo.
Asi hapana chinhu chisingagoneke saka kana iwe uchida chiBuddha kana iwe uchingoda kuenda kure kana kunakidzwa nenjodzi huru pano ndinokusiira iwe yese ruzivo runoshanda iwe rwaunoda kufamba uye kuona Tibet.
2 Mvumo yekuenda kuTibet
3 Ruzivo uye matipi ekufamba kuenda kuTibet
Iri pabani rakaiswa pamamita anopfuura zviuru zvina zvekukwira saka ndosaka ichinzi denga renyika. Hukama neChina, nhasi hunopesana, kunyangwe husiri hwekare kudaro, hwakareba-kumira. Nhoroondo yeTibet neChina inotanga apo maMongolia paanobatanidza Tibet munzvimbo dzawo uye kumanikidza kutonga kwavo.
Rangarira izvozvo China Yong Dynasty yaive yeMongolian saka kutonga kwakaramba kuchisimba pasi pedzinza iri. VaTibetan vaive nemakakatanwa avo emukati nemakakatanwa, pakati pemapoka echiBuddhist, ayo maChinese dzimwe nguva aibatsira kugadzirisa zvemauto nekudzora chiyero neimwe nzira kana imwe. Nekudaro, ivo vatungamiriri vezvematongerwo enyika, vanonzi maLamas, vaive vachibudirira kuruka avo vezvematongerwo enyika masimba, zvinzvimbo uye masimba.
Iyo Qing Dynasty yaive zvakare iri muTibet, kutsigira lama pabasa kusvikira China yekare yapera muna 1912. Panguva ino tinozvibvunza isu, asi zvakadii vekuMadokero? Zvakanaka, VekuMadokero vakaita kuisa chipunu imomo. Yekutanga yaive iyo ChiPutukezi pakutanga kwezana regumi nemanomwe remakore, gare gare kwakauya iyo Mamishinari echiKristu, kunyange ma lamama akavadzinga. Kurwisana kwemasimba. Iyo Chirungu Vakasvika kuti vaone kana vaigona kutengesa asi maChinese akavhara miganhu yeTibetan kweanopfuura makore zana.
Zviripachena kuti izvi hazvina kumisa maChirungu kwenguva yakareba saka vakasangana neHimalaya neAfghanistan. Vakatumira vasori ndokugadzira mepu. Iyo Russia vakaita saizvozvo. Gare gare, pakutanga kwezana ramakumi maviri, maChirungu akatumira mauto kunodzivirira maTibetan kusaina chimwe chinhu nevaRussia. Asi yaive China yakapindura, ichiita kuda kwayo kuchangamire nekuda kwenhoroondo refu yekutonga uye kuvepo kwaive nako mundima.
MaChirungu anoziva kupisa moto saka panguva iyoyo iyo Kubudirira kweTibetan uko vamwe verudzi vakauraya vatendeuki veFrance, Manchu, Han Chinese, uye vechiKristu. Tibet akapedzisira asaina chibvumirano neEngland uye neChinawo. Pakupedzisira vese Great Britain neRussia vakabvumirana kusaita neTibet pamusoro pehurumende yeChinese, vachiziva simba rayo pamusoro pesimba reTibet.
Ichokwadi ndechekuti China haina kuenderana uye yakatanga mushandirapamwe wayo "yekuita Tibet Chinese." Nekuwa kweyekupedzisira mambo weChina muna 1912 Dalai Lama uyo aive atamira kuIndia akadzoka akadzinga munhu wese kunze. Kwechinguva Tibet akanakidzwa neimwe rusununguko, kunyangwe paine kumwe kupokana kwemuganho neChina, iyo yanga ichipfuura nenjodzi yayo, asi en 1959 iyo People's Republic of China yakapinda muTibet uye isu tatoziva zvakaitika.
Mvumo yekuenda kuTibet
Nhasi Tibet inharaunda yeChinese saka Chinhu chekutanga chaunoda iChina vhiza. Izvo hazvina kukwana nekuti sezvo iri nzvimbo inokakavara, kuwana kunovharirwa uye kudzorwa, saka iwe unofanirwa zvakare kugadzirisa rakakosha mvumo.
Nezve mvumo iyi iwe unofanirwa kuziva izvo gore rega rega kune nguva yekuvhara, tsika yanga ichingoitika kubvira 2008 uye izvo zvinoreva kurambidzwa kwekushanya. Gore rino riri pakati paFebruary 25 naMarch 31 asi rinodzokera pane zvakajairwa musi waApril 1. Iyo mvumo kana mvumo zvinosiyana zvinoenderana nenzvimbo dzauri kuronga kushanyira uye imwe neimwe inopihwa nemahofisi akasiyana.
Wana iyo Chinese vhiza mune wega maitiro, asi izvo zvimwe zvinobvumidza zvinowanikwa chete kuburikidza nesangano rekufamba. Unogona kutaurirana nemasangano aya pamhepo, mazhinji akavakirwa muTibet, nekuti iwo anonyatso kufambisa nzira yekunyorera ivo. Pane vhiza yakakosha inonzi Boka VisaIcho chimiro cheChina Chekupinda Visa icho chiri chevashanyi vekunze vanoshanyira Tibet kubva kuNepal.
Mune ino kesi iwe haudi Chinese Chinese vhiza. Kana iwe uine imwe, iwe uchatofanirwa kugadzirisa iyo Boka Visa muKathmandu, ehe. Kunyorera Boka Visa Visa hongu kana hongu unofanirwa kuendesa a TTB mvumo uye tsamba yekukokaNekudaro kudikanwa kwesangano revashanyi. Uye kune zvese anotora mazuva mana kana mashanu. Iyo TTB ndiyo Tibet Tourism Bureau Chibvumirano cheLibet Visa. Iwe unozvida iwe kana uchienda kuTibet kubva ku mainland China kana kupinda kubva kune dzimwe nyika kana kubva kuNepal.
Iwe haugone kubuda mumahofisi evashanyi uye iwe unofanirwa kunyorera kwaro kwemazuva makumi maviri zuva risati rasvika raunoda kufamba. Izvo hazvina mutengo, asi zviri pachena kuti iyo agency ichakubhadharisa iwe kuita kwacho. Iyo imwe mvumo ndeye PSD uye ndiye mumwe ichavhura mikova kunzvimbo dzekunze dzeLhasa seGomo reEverest kana Ngari Prefecture.
Zviri nyore kwazvo kugadzirisa nekuti ukangosvika muLhasa unoenda nepasipoti yako neTTBP kusangano uye zvinokuitira zvese. Zvinotora maawa mashoma uye zvinodhura makumi mashanu emadhora pamunhu.
Kana iwe zvakare uchida kushanyira dzinonetsa nzvimbo dzemauto (Yunnan, Sichuan, Xinjiang, Qinghai, Pomi, nezvimwewo), unofanirwa kuve neiyo Mvumo yeMasoja uye TTB nePSB. Mvumo yechiuto iyi kwete kune vanhu vanofamba vega saka zvekare sangano revashanyi rinowoneka. Zvinotora zuva rimwe kana maviri kugadzirisa uye kuita 100 yuan pamunhu.
Pakupedzisira pane Border Pass iyo inobvumira kuuya nekuyambuka muganho nedzimwe nyika dzeChinese kana matunhu. Kana iwe usina pepa iri haugone kukwira Gomo reEverest, semuenzaniso. Kunyangwe iwe uchifamba nendege kubva kuLhasa kuenda kuKathmandu, vanozoibvunza kuairport. Inogadziriswa muLhasa, kuburikidza nesangano, uye inogona kutora mazuva matatu kusvika mashanu.
Ruzivo uye matipi ekufamba kuenda kuTibet
Isu tinotaura zvakawanda nezvesangano rekushanya uye zvinongoitika nekuti Iwe haugone kufamba wega muTibet kunze kwekunge uchizogara wega muLhasa. Asi vashoma vanhu vanoenda kure zvakadaro kuti vagare muguta guru. Ini ndaitokuudza iwe kuti uzive humwe hupfumi hweLhasa iwe unodawo gwara, kuti unakidzwe zvakanyanya uye zvirinani, asi zvese zvibvumirano Kufamba famba yakanakisa yeTibet, inogadziriswa kuburikidza nesangano.
Ramba uchifunga kuti kukwirira kwakanyanya kudaro chakanakira kusvika mazuva mashoma pamberi kuti uwane kujairana uye kwete kuzorwara gare gare. Funga nezvekwaunobva, kubva pakakwirira zvakadii. Kana dziri mbatya, zvese zvinoenderana nemwaka asi zvakanyanyisa ndezvekupfeka sehanyanisi nekuti kana zuva richipisa. Uye zvechokwadi, nehungwaru uye pasina kuratidza zvakawanda pakushanyira tembere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Matipi » Zvese zvaunoda kuti uzive kuenda kuTibet
Iwo akakosha mamuseum eEurope kana uchifamba